I-APT. I-SIERPES, i-wifi, i-Flatroof, i-HVAC (VFT/SE/00239) - I-Airbnb
I-APT. I-SIERPES, i-wifi, i-Flatroof, i-HVAC (VFT/SE/00239)
342 okushiwo abanye
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ana María
U-Ana María Ungumbungazi ovelele
OKUSHA!. Ngibuze ulwazi. Jabulela izimpawu zendawo okufanele uzibone kanye “nama-tapas” ahamba phambili ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
Ifulethi lisenkabeni yesikhungo somlando wedolobha, phakathi komgwaqo uCuna noSierpes. Izindawo ezaziwa kakhulu njengeLebrija Palace, isikwele saseSalvador noma isikwele saseSan Francisco ziqhelelene nazo.
Kukhona amafulethi amahlanu kuphela endlini yonke ngakho-ke umoya uthule futhi usekhaya.
Ifulethi lifakwe ukufudumeza nomoya ukuze ukwazi ukujabulela ngisho nehlobo lase-sevillian.
Igumbi lokudlela libanzi kakhulu linovulandi ababili, itafula lezivakashi ezine, isitulo esilula kanye nombhede osofa ababili.
Igumbi lokulala, eline-balcony futhi, lifakwe i-wardrobe ephindwe kabili, isifuba samadrowa kanye nombhede wabantu ababili.
Indlu yokugezela yasendlini ayinkulu kakhulu kodwa ingenisa umoya, inhle, ihlelekile futhi ihlome ngokuphelele.
Ikhishi liyathandeka futhi likhulu ngokwanele ukuze ujabulele ukupheka eminye yemikhiqizo yasendaweni ongangena ezimakethe njenge-“La Encarnación”, imizuzu emibili nje uhamba ukusuka efulethini.
Kukhona izitebhisi ekhishini zokufinyelela ekamelweni elincane elivulekele ithala eliphezu kophahla (kukhona amabhodwe okuyizimbali ezivamile zaseSpain ezibizwa ngokuthi “geranios”).
Ithala elisophahleni libalele kakhulu, libanzi futhi lingasetshenziswa abanye omakhelwane abahlanu. Phambi kwekamelo kunetafula nezinye izihlalo okungezasefulethini; kumnandi kakhulu ukuvula ikhandlela ebusuku ngenkathi uphuza noma ukudla kwasekuseni ukuze uqale usuku ngaphandle ngesikhathi sasentwasahlobo (kukhona ubisi, ikhofi, itiye kanye noshukela ekhishini).
Uma uhlala ekhaya phakathi Neviki Elingcwele, nakuba kuhlaba umxhwele kakhulu ukujabulela "Ama-Procesiones" emgwaqeni, ungabona futhi amaningi awo ephuma eya kuvulandi wefulethi noma ekhuphukela phezulu ophahleni. Njalo ngonyaka othile ucula ebizwa ngokuthi “Saetas”, izingoma zemvelo ezinikelwe kuJesu Kristu kanye neNcasakazi uMariya, kuvulandi wendlu ephambene. Ngiphakamisa ukuthi ukhuphukele phezulu ophahleni futhi ulalele lezi zingoma ezivusa imizwa, ezigcwele imizwa nothando. Kuzoba namashejuli eviki Elingcwele ekhaya ukukusiza ukuthi ubone “Izinqubo” eziningi ngangokunokwenzeka futhi wazi ukuthi yibaphi abahamba ngomgwaqo u-Cuna, uma kwenzeka unquma ukuzibona ekhaya.
IMINININGWANE YENZA UZIZWE USEKHAYA:
-Ithelevishini, iDVD neWifi.
-I-microwave, i-toaster, iketela, i-cofee/i-tea maker, isikhamo sikagesi se-citrus, iwhisk, i-microwave, i-tableware kanye ne-kitchenware.
-Imikhiqizo yokuhlanza, indwangu, itafula lelineni, insimbi namanye amagajethi amaningi okungenzeka udinga ukuwasebenzisa.
- Ilineni, ijeli yeshawa, ishampoo, i-airconditioner, i-tooth paste, igwebu lokushefa, insingo elahlwayo, okomisa izinwele, okokukhipha izimonyo, okokuxosha izinambuzane neminye imikhiqizo.
-Ikhithi yosizo lokuqala endlini yokugezela.
-Izingubo zelineni namaduvethi ekamelweni.
-Layini phezu kophahla lwendlu.
-Umbhede wokuhamba wezingane.
Uma ungase udinge okuthile obufisa ukuba nakho, ungangabazi ukungazisa futhi ngizojabula kakhulu ukwenza konke okusemandleni ami ukuthi ngikutholele kona.
4.85 out of 5 stars from 342 reviews
4.85 · 342 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-342
Le ndawo iyaphila ngempela, igcwele amatshe esikhumbuzo, izindawo zokudlela nezitolo.
Emizuzwini emibili uhamba ngezinyawo: isikwele se-“Salvador” sizoba nebhere, “Encarnación” o “Setas gigantes” isikwele esinemakethe enhle kanye nama-“bares de tapas” amaningi endaweni , “Museo” square with The “Bellas artes” Museum, Isakhiwo esihle kakhulu sokujabulela uMurillo, uValdés Leal noma u-Zurbarán, ungqondongqondo wemidwebo yaseSpain. Lesi sikwele siyindawo yokuhlangana yabaculi abaningi abakhombisa imisebenzi yabo njalo ngeSonto.
Ngemizuzu emihlanu uhamba ngezinyawo: i-bullfighter "La Maestranza", i-"Torre del Oro" edumile emfuleni i-Guadalquivir, i-Atonish Cathedral nezindawo ezizungezile, ingadi ye-"Alcalzares" o "Santa Cruz" engumakhelwane.
Emizuzwini eyishumi noma eyishumi nanhlanu uhamba ngezinyawo indawo yase-"Triana" egcwele amasonto kanye ne-"bares de tapas"; eduze ne-"Triana" ungakhohlwa ukuhamba kahle eduze komfula ukuze ujabulele indawo ye-"Cartuja" Island kude.
Uma ungafuni ukuphuthelwa yi-“Plaza de España”, iNyuvesi kanye nehhotela elidumile i-Alfonso XIII, kuzokuthatha imizuzu engamashumi amabili nje uhamba ngezinyawo noma uma ungakuthandi ukuhamba, vele ugibele ithilamu e-Plaza Nueva square (ku- ekugcineni komgwaqo iSierpes), phuma esitobhini sesibili (eceleni nje kwehhotela i-Alfonso XIII) bese kuthi ngemizuzu emihlanu uhamba ngezinyawo uzofika "ePlaza de España", isikhumbuzo sendawo esihlaba umxhwele kakhulu ngaphakathi kwepaki "Maria Luisa".
Uma uthanda izitolo zakudala, kunomgwaqo obizwa nge-“Acetres” eduze kwase-Rivero street lapho ungathola khona izinto zelukuluku futhi ngithanda ukuncoma ibha encane enokudla kwendabuko nekhwalithi ebizwa ngokuthi “Er Caserio” emgwaqeni ofanayo.
Ibungazwe ngu-Ana María
Izivakashi zingangithinta noma kunini ezisidingayo. Bangangithumelela i-imeyili, bangithumelele imiyalezo noma bangishayele ucingo. Ngikhuluma isiNgisi futhi nakuba isiFulentshi sami sithi ukugqwala kancane, ngiqinisekile ukuthi lolo limi ngeke lube yinkinga ukulungisa noma yini!.
U-Ana, umngane wami, kuzoba umuntu wami engimethembayo ozokunikeza izikhiye futhi azithathe uma usuphuma, ikakhulukazi uma ngingekho edolobheni. Ungumnikazi wendawo yokudlela enhle eduze kwekhaya futhi uhlala kwenye indlu ephambene, ngakho-ke singavumelana nezimo kakhulu ngokufika kwakho nokushiya izikhathi ngisho nomthwalo wakho ukuze wenze ukuhlala kwakho kube lula kuze kube umzuzu wokugcina !!!. Uzozizwa usekhaya nabangani abahlala eduze kakhulu nawe ukuze ulungise noma yini.
Izivakashi zingangithinta noma kunini ezisidingayo. Bangangithumelela i-imeyili, bangithumelele imiyalezo noma bangishayele ucingo. Ngikhuluma isiNgisi futhi nakuba isiFulentshi sa…
UAna María Ungumbungazi ovelele